Ahoana no ahafantarako hoe inona FSX ny tranonkala dia napetraka eo amin'ny solosainako? FSX-P1, SP2 na Acceleration?
Mba hahafantarana izay dikanteny FSX dia napetraka ao amin'ny ordinateranao, mora ny: Start FSX, ary manomboa fiaramanidina izay tianao, miaraka amin'ny fiaramanidina tianao. Ankehitriny, eo an-tampon'ny efijery dia sokafy ny bar de menu (raha tsy efa misokatra) ary tsindrio ny «Help» ankavanana. Eto, tsindrio ny «About». Ny varavarankely manaraka dia miseho amin'ny dikan-teninao FSX: